Dowladda Federalka ah oo Qalab Caafimaadka ku wareejisay Maamulka Koonfur Galbeed - Awdinle Online
Dowladda Federalka ah oo Qalab Caafimaadka ku wareejisay Maamulka Koonfur Galbeed
April 28, 2020 (Awdinle Online) – Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxey qalab caafimaad oo loogu tala-galay ka hortagga xanuunka COVID-19 ku wareejisay maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya.
Wasaaradda ayaa waxey qalabkas ugu tala-gashay in looga howl-galo goob laga sameeyay magaalada Baydhabo oo si dadka lagu karaantiilo. Mas’uuliyiinta dowladda ayaa waxey sheegeen iney doonayaan in guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay si wada-jir ah xanuunkaan ula dagaallamaan.
Maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku ammaanay dadaallada dowladda dhexe iyo ka warqabka Maamullada ka jira Soomaaliya, sida ay warbaahinta u sheegeen markii qalabkaan ay la wareegayeen.Dowladda dhexe ayaa hadda waxey waddaa dadaal xooggan oo ku aaddan sida loola dagaallami lahaa in xanuunka Coronavirus uusan ku faafin waddanka, iyadoo uu cudurkaan soo ritay dad badan, halka bukaanno dhowr ahna ay u geeriyoodeen.
Previous articleMuwaadiniinta Ingiriiska Oo Looga Digay U Safrida Soomaaliya.
Next articleSenator Amiin “Hab-Dhaqanka Agaasimaha NISA waa xadgudub lagu beegsanayo dad gaar ah”